Inona no atao hoe HTML? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny H	» HTML
HTML no fanafohezana ny Fiteny fanoratana hypertext.
HTML dia andiana fitsipika ampiasain'ny mpandrindra mba hamoronana pejy web. Izy io dia mamaritra ny atiny, ny rafitra, ny lahatsoratra, ny sary ary ny zavatra ampiasaina amin'ny pejin-tranonkala. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny rindrambaiko fananganana tranonkala dia mampiasa HTML ao ambadika.